ခိုင်မာကျော်ဇော – ပဒိုမန်းရှာပြောတဲ့ အနူလက်သီးနဲ့ လမ်းပြောင်းသွားတဲ့ ကေအဲန်ယူ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၆ ကေအဲန်ယူ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုမန်းရှာကျဆုံးခဲ့တာ ဒီနှစ်ဆို (၈) နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ သူကျဆုံးပြီး နောက်မှာ ကေအဲန်ယူ...
ခိုင်မာကျော်ဇော – တောင်ပေါ်သူသို့ ….. သစ္စာစကား
ခိုင်မာကျော်ဇော – တောင်ပေါ်သူသို့ ….. သစ္စာစကား (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅ တောင်ပေါ်သူရယ် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကိုယ်ပိုးခဲ့တာ ဆယ်နှစ် ဆယ်မိုး ဒေါနတောင်ကြီး ကျိုးတော့မယ်။ တောင်ပေါ်နှစ်ကူး...
ခိုင်မာကျော်ဇော – ခြေရာ (၁)
Photo – Khaing Mar Kyaw Zaw’s facebook ခိုင်မာကျော်ဇော – ခြေရာ (၁) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅ မိုးခါးရေ ဘယ်သူသောက်သောက်...
ခိုင်မာကျော်ဇော – အဆိပ်သင့် ပန်းများ
မင်းကိုနိုင်၏ ပန်းချီကား ခိုင်မာကျော်ဇော – အဆိပ်သင့် ပန်းများ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ နတ်ဆိုးတွေပစ်တဲ့ ကျည်ဆံဟာ ကလေးတို့ ရဲ့ရင်ဝကိုမှ တည့်တည့် ထိမှန်ရတယ်လို...
ခိုင်မာကျော်ဇော – ရှမ်းပြည်ဟာ ငါတို့ ရဲ့ ပါရီ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ …. ပါရီပါပဲ ငါတို့ ရင်တွေ ကြေကွဲရတယ်။ ပါရီဟာ...
ခိုင်မာကျော်ဇော – မျက်ရည်သောက်တဲ့ စစ်
No Information, File Photo ခိုင်မာကျော်ဇော – မျက်ရည်သောက်တဲ့ စစ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ပွင့်လင်းရာသီ မောရှမ်းပြည်မှာ စစ်ဟုန်မာန်တင်း ဒေါသပြင်းတော့…. ရိတ်သိမ်းသူကင်း စပါးခင်းတွေ ငြိုးယော်ခွေကျ...
ခိုင်မာကျော်ဇော – သမိုင်းနီနီ…. ပန်းနီနီ
ခိုင်မာကျော်ဇော – သမိုင်းနီနီ…. ပန်းနီနီ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ အခုတလော ဒေါ်လေးနဲ့စကားပြောတော့ အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တစုထဲ စု...
ခိုင်မာကျော်ဇော – မန်းရှာ (သို့ မဟုတ်) မကြွေတဲ့ ကြယ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် သွေးနဲ့ ရေးတဲ့ အက္ခရာ...
ခိုင်မာကျော်ဇော – အညောင်းမိနေတဲ့ကမ္ဘာ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ နာရီတွေနဲ့ အပြေးပြိုင် အကြိမ်ကြိမ်လည်း ကျရှုံး လမင်းကတော့ ချိုင့်ဝှမ်းတွေပေါ်ဖြတ်သန်းရင်း လက်ပမ်းကျနေတဲ့ပုံနဲ့ ပေါ့၊ ရာသီတွေကတော့ နေလောင်ပန်းတို့ ရဲ့ အဆုပ်လိုက်အခဲလိုက်...
ခိုင်မာကျော်ဇော – တခါက လိုင်ဇာ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၄ လိုင်ဇာဆိုတာ ကျမ အရမ်းကို ရောက်ဖူးချင်တဲ့ တော်လှန်ရေး နယ်မြေ ဒေသတခုပါ။ လိုင်ဇာအကြောင်းကို ကေအဲန်ယူ...
ခိုင်မာကျော်ဇော – လိုင်ဇာ ကျောက်စာ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄ မနောမြေက ရွှေလက်ကမ်းတယ် စစ်ဘီလူးက ကျည်ဆံအမ်းတယ် ကချင်ကြယ် ၂၃ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ လိုင်ဇာမှာ သွေးမိုးတွေရွာ။ (၂၀...
ခိုင်မာကျော်ဇော – ကျောင်းသား သပိတ်ကို ထောက်ခံအားပေး ၀န်းရံကြပါ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၄ ကျမဟာ နေ၀င်းအစိုးရတက်လာတဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ် မဆလ ခေတ်မှာ မွေးခဲ့ပြီး အဲဒီခေတ်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်အောက်မှာ လူလားမြောက်ခဲ့ရသူတယောက်ပါ၊...
ခိုင်မာကျော်ဇော – စကားပြောသော မျက်ရည်
ခိုင်မာကျော်ဇော – စကားပြောသော မျက်ရည် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄ ပုန်းတဲလေး တလုံးပေါ်မှာ ကလေးလေးတယောက် မျက်ရည်တွေ တလိပ်လိပ်နဲ့အသံတိတ် ငိုကြွေးနေတယ်။ ကလေးရဲ့ မျက်ရည်ထဲမှာ...
ခိုင်မာကျော်ဇော – နော်ရှာခု (ဖီးစံလင်း) ကျမတို့ ဘ၀တွေကို တော်လှန်ရေးကပိုင်တယ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ မှီတင်း နေထိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသားလို...
ခိုင်မာကျော်ဇော – ဗိုလ်မှူးကြီး မေရီအုန်း- မုန်တိုင်းထဲက ပန်းရိုင်းနှင်းဆီ (သူ့ဖေစ်ဘွတ်) နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၄ “အဖေက ပြောခဲ့ဘူးတယ် အလုပ်တခုကို လုပ်ရင် ဆုံးခန်းတိုင်အောင် လုပ်ရမယ်”တဲ့၊ “အဖေပြောတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ...